तेस्रो दिनसम्म मध्यभोटेकोशी जलविद्युतको आईपीओमा मागभन्दा २.८८ गुणा बढी आवेदन
असोज २२, काठमाडौं । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा निष्कासनको तेस्रो दिन सम्ममा २ दशमलव ८८ गुणा बढी आवेदन परेको छ ।
धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकका अनुसार शुक्रवार साढे ३ बजेसम्म १५ लाख ६२ हजार १८० जना आवेदकबाट २ करोड ३५ लाख ९२ हजार २९० कित्ता शेयरको लागि आवेदन परेका हो । यो माग भन्दा २ दशमलव ८८ गुणा बढी हो ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्मको वास्तविक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनी रू. ५ करोड ५० लाखभन्दा बढी नोक्सानीमा रहेको छ । उक्त अवधिसम्म कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ९४ दशमलव ३९ रहेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी भने रू. १ दशमलव २२ ऋणाम्त्मक छ ।